Hambalyo ku saabsan arooska erayadaada ku qoran. Hambalyo asalka ah ee arooska ee erayadaada ee aayadda
Xiriirka Wedding Hambalyo ku saabsan arooska
Hambalyo wanaagsan ee arooska ee erayadaada ku jira qiyaasta iyo aayadda
Aroosku maaha kaliya dabbaaldeg ah oo ah labo jacayl. Tani waa bartilmaameedka cusub ee, mararka qaarkood lama huraan, laakiin nolol farxad leh. Xusuusta maalinta qooyska qoyska is-qabqabtay sanado badan oo albaab ah oo sawirro leh, sawirada salaanta iyo sawirada fiidiyowga. Maaha wax la yaab leh in maalintaas la xasuusto dhallinyaradu ay sugayaan rajo qurux iyo taabasho leh kuwa ka soo qaybgalay inay wadaagaan dhacdadan farxad leh iyaga. Hambalyo ku saabsan maalinta arooska waxay noqon kartaa aayadda ama qandaraaska, oo lagu muujiyey erayadaada ama waxaad ku qortaa warqad. Waxyaabaha ugu muhiimsani waa in dhammaan rabitaanada maalinta guurka ay yihiin kuwo daacad ah oo ka tagaya wadnaha. U diyaari arooska arooska ee fudud waxay ka buuxsamayaan jacayl iyo naxariis.
Hambalyo si farxad leh maalinta arooska ee erayadaada ee aayadda
Maro madow, dhar iyo dhar, Bouquet arooska iftiin - Maalinta adkaanta, cajiib ah ayaad ku faraxsan tahay adduunka. Ha la xusuusto sixirka. Tani waa maalinta ugu fiican. Maanta ku dhuftay shaabad ku taal xafiiska diiwaangelinta ee yoolka adag. Waxaan jeclaan lahaa inaad fahamto, Xasaaro dareemo, jacayl weyn. Sidaas awgeed noloshu gacanta kuma qabsan karto gacmaha gacanta.
Meelahaagu sidan buu u nooleeyaa, Oo waxaad ku dhaaran doontaa jacayl quruxsan. Waxaan rajeynayaa balanqaadyadani inay ku hayaan. Sabirka ha u dulqaataan caawimo, jacayl iyo jacayl naxariis leh. Midba midka kale waad ku faraxsan tahay maalin kasta mar kale. Keen shixnad qoyskaaga u duuli mawjadaha. Wadajir, farxad iyo murugo, Waa inaad wadaagtaa daryeelka.
Waxaad maanta noqotey qoys, Hambalyo adiga. Waxaad jeceshahay barwaaqo, Carruurtii sharafta iyo jacaylka. Ilaa wakhtiyada madadaalo madhan Xusuusnow Maalintan iyo hooskii waxba ka qaban waayeen qirashadaada! Ha sii walaacin muddo dheer, Si aan waxba ku jirin khilaafka qoyska. Kii jecel yahay isagoo aan dib u eegin Waa marnaba eedeyn.
Waxaad noqotay mid ka mid ah, Half of labada la isku raacay. Waxaad leedahay mustaqbal weyn ka hor, ma aha had iyo jeer nolol sahlan. Hadaad lumin doontid awoodda dareenkaaga. Waxay u sahlanaan doontaa xilligaas, Sida loo qabsado gacaliyahaaga. Kaliya kaliya kuma jebin karo Dabaylaha xun ee qashin qubka. Waad ku faraxsan tahay, nasiib wacan, Riyooyin ha noqdaan!
Hambalyo quruxda arooska ee ereyadaada ku qoran
Gacaliye cusub! Waxaan jeclaan lahaa in aad xusuusatid abidkan farxad iyo iftiin leh ee aad sugaysay. Waqtiyada murugada qoyska, oo ay ku dhacaan dhammaan labada lamaane, xasuusno indhaha indhahoodu midba midka kale marka aad ku dhawaaqday nin iyo xaas. Samee naftaada adoo sannadahan dareema dareenka, dareenka iyo jacaylka ku qabo xiriirkaaga. Nolosha qoyska - waa maalin shaqo adag, sabir iyo naftaada. Dhiso iyo hagaajinta ururkaaga. Ka dib, abaalmarintu waa u qalantaa! Adiga waxaa jooga qofkaas qofka ku xiga oo ay fududahay, degenaansho iyo ammaan. Qofka uu joogitaanka joogtada ah noloshiisa wuxuu ku buuxiyaa macne gaar ah. Jacayl iyo is ogow midba midka kale. Ku faraxsanow! Waa qadhaadh!
Waa maxay qoys? Tani waa midnimada nafta, jirka, fekerka iyo riyada mid ka mid ah, qof gaar ah oo aan la aqbali karin. Maanta waxaad noqotay qoys, oo sidaas daraaddeed, aad ayaad nasiib badan u tahay nolosha - waxaad la kulantay kala badhkii yaraa. Waxaan jeclaan lahaa inaad ixtiraamto hadiyaddan weyn ee qaddarinta, sababtoo ah looma siinayo qof walba. Waxaan jeclaan lahaa in gabadha yar ee awoodda leh in aysan u fiirsan nacaybka haweenka, iyo xaaskiisa cusub - xikmaddu maaha inay fiiro gaar ah u yeelato ladnaanta labka ah. Si aan noloshu u dhicin, marwalba raadso isdhexgal oo ka taxadara aduunyada jilicsan ee gudaha. Jacaylka weyn, jacaylka, cabsida, dulqaadka iyo fahamka. Talo iyo jaceyl!
Carruurta qaaliga ah, maalintii aad guursatay, waxaan rabaa inaan kuugu hanuuniyo qoyskaaga oo dhan. Hal caqiido, hal riyo iyo jacayl aan la qiyaasi karin oo lagu sharaxi karo. Mar walbo hal dhinac u fiirso, siiso oo dareemaan ka xumahay midba midka kale. Ka digtoonow inaadan dhaawac u geysato qofka aad jeceshahay oo leh ereyo ficil ah ama ficil ah, naftaada u diyaari naftaada wakhtiyada guuleysiga iyo rajada. Waxaad isku aragtay adduunkan adduunka weyn, tani ma fududa. Sidaa daraadeed, badbaadi oo u qoondeeyaan hadiyaddan weyn ee cadowga. Dareenka iyo jacaylka aad ku leedahay cilaaqaadka, cibaadada iyo jacaylka sariirta guurka, fahamka iyo dulqaadka noloshooda adag. Jacayl iyo farxad! Waa qadhaadh!
Xulashada salaanta ugu fiican on sanad guurada arooska, eeg halkaan .
Dhanka gaaban ee arooska ee erayadaada ee aayadda
Codka muraayadaha, hooyooyinka way ooyaan, waxaad horey u ahaan jirtey qoys. Maalinta ugu dambeysa waxaan kuugu farxinayaa farxad.
Waxaan doonayaa qoys dhalinyaro ah Si aad u barwaaqowdo, Ku noolow farxad, faham, Xilliga wanaagsan iyo saacad adag.
Waad ku faraxsan tahay inaad maanta ciriiri waltz qurux badan. Ku nooshahay sida qoob ka ciyaarka ah, Ha is ilaalin indhahaaga.
Daacadnimada Swan, Dareemo muuqaal ah, Dareemid delicious, Jinsiga-xasaasiga ah, Maalinta arooska quruxda ah Waxaan ku faraxsanahay.
Xaalad sharci ah Waxaad gashey qof kasta oo kale, Habeenku kuleylka, Maalmadu way faraxsan yihiin, way wanaagsan yihiin.
Hambalyo gaaban adigoo guursanaya ereyadaada
Gacaliye cusub, waxaan kuugu hambalyeynayaa bilowga nolosha qoyska iyo waxaan jeclaan lahaa jacayl weyn. Dareenkan cajiibka ahi wuxuu ku soo biiray qalbiyadiinna wuxuuna u hoggaansamay go'aankaas. Sidaa daraadeed, jacaylku wuxuu sii wadaa inuu noqdo saaxiibkaaga daacadnimada ah: wuxuu siinayaa xoog iyo waxyi iloobi, wuxuu kaa caawinayaa inaadan aragto cilladaha midba midka kale, kor u qaadida lugta bidix oo jilicsan murugada.
Waxaad horey u tahay nin iyo xaas - iyo tani ma ahan xaalad kaliya, laakiin qaab nololeed iyo xaalad maskaxeed. Waxaan jeclaan lahaa inaad ka heshid tan, illaa hadda, laakiin aad u soo jiidaneyso dhinaca nolosha. Xushmee sharafta magaca lamaanaha iyo xaaskiisa, u istaag qoyskaaga buur leh oo midba midka kale ku daawee.
Maalinta arooska, gacaliyeha cusub, waxaan doonayaa in aan si dhakhso ah u qeexo mashruucaaga ugu muhiimsan - si aad u hesho dhaxal. U ogolow qoyskaagu inuu kobciyo oo uu is-buuxiyo, qosolka farxad leh ee carruurta marwalba wuxuu ka yimaadaa gurigaaga, qolalka yaryar ee qolalka, iyo wadnaha ayaa ka buuxsamaya farxad iyo farxad.
Waa maxay jacayl dhab ah? Iyadu ma ceebeyso ama xishoodin, waxay aaminsan tahay oo u dhaaftaa wax kasta, waxay ku adkaysataa iyo allabaryo, iyadu waxay badbaadisaa oo u bixisaa baalasheeda, waxay siinaysaa rajo iyo iftiin iftiin gudcur ah. Gacaliye cusub, waxaan jeclaan lahaa inaad ku noolaato jacayl dhab ah, ka dibna ururkaagu wuxuu noqon doonaa mid xoog leh oo aan la burburin karin.
Maalinta dhalaalaya ee arooska, waxaan rabaa in aan jeclaado in nolosha qoyska ay u eg tahay qoob ka ciyaarka. Iskudhufka waltz ee waltz ee ka mid ah nolol maalmeedka cawl, dab la shito on habeenkii cawaaqib, ogaado xiriirka ku jira qaylada ee baaskiil-macaan, ku faraxsan iyo qosol ku jira qaylada ah cha-cha-cha, iyo ka adkaado dhibaatooyinka qaabka of foxtrot.
Rajooyinka loogu talagalay dadka cusub ee ka soo jeeda asxaabta iyaga oo erayadooda u taagan aayaddooda
Si aad u ilaaliso - waxaan ku dhihi doonaa si wanaagsan, Waxaan ku ammaanaynaa midabkaaga xooggan. Waxaan dooneynaa inaan dareemno macaannadan xooggan ee guurka, guurka. Dib-u-soo-kabashada qoyska Waxaan, dabcan, aad u rajeynayaa. Ha ahaato iftiin iyo isku-xirnaansho.
Iyadoo xisbiyada bachelor-ka waxay ku nuuxnuuxsadeen nolol fiican weligood. Ka horow ha ahaato farxad Sanad uun buuxda. Waxaad u baahan tahay inaad ku qadariso maqnaashaha qoyska. Wixii ku saabsan asxaabtooda farxadkooda Sidoo kale ha iloobin.
Si aad u dhisto maalinta arooska la xusuusiyo kuwa cusub ee ugu farxada badan noloshooda, u duceyso erayada diiran iyo taabashada. Uma baahnid inaad ahaato gabay weyn - hambalyo aad u qurux badan oo ku saabsan guurinta erayadaada, wadnaha lagaga hadlo, hubaal waad ku farxi doontaa dhalinyarada faraxsan. Xitaa hambalyo gaaban oo ku saabsan qiyaasta, oo aad adigu maalgelisay naftaada, waxay noqon doontaa hadiyad cajiib ah oo loogu talagalay qoys cusub. Ku soo dhawow dadka aad jeceshahay hurdada aad u quruxda badan arooska, sababtoo ah ma jirto wax ka muhiimsan diirimaad daacad ah, oo lagu xukumay erayo fudud.
Qoraallada asalka ah iyo qosolka ah ee martiqaadyada ee arooska aayadda iyo xajmiga
Poems for arooska ka aroosadda
Xayawaanka ugu fiican ee arooska ee erayadaada iyo aayadda
Poems for arooska
Ereyada quruxda badan ee mahadnaqa waalidiinta ee xafladda arooska iyo qalin-jabinta
Hibo qurux badan on sanad guurada arooska ee aayadda iyo qandho
Daaweynta cudurada beerka
Gacanta oo leh ham
Wareysi dhawaan laga qaaday Nastya Kamensky
Qiyaasta jirka ee jirka ee ilmaha
Jimicsiga jimicsiga ee ugu yar
Guryaha muhiimka ah ee boorashka semolina
Sidee loo kariyaa cuntada kulul ee maalin walba?
Haweenka uurka leh waxay diyaarinayaan dhalmada
Qoryaha la jarjaray
Qof kastaa wuxuu u baahan yahay inuu barto inuu isku dejiyo oo uu iloobo dhibaatooyinka nolosha
Habka Avant-garde ee dharka
4 sir-xafiis oo qarsoodi ah: sida shaqadu tahay, si aanay u bogsan
Dhalasho ilmo ka baxsan isbitaalka dhalmada
Sida loo doorto dahabka haddii aad ka weyn tahay soddon
Qalabka cuntada, taas oo ka wanaagsan inaad iibsato
Tilmaamaha waxbarashada labka ah
Foornada Caanaha: waa hub aad u fiican si loola dagaalamo buurnaanta
Harcho ee kala duwan